बीआरआई हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छ : प्रधानमन्त्री- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
मित्रताको सिँढी थप्न र साझा जित खोज्न आएको हुँ
प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक चीन भ्रमणमा आउनुभएको छ । यसको उद्देश्य र अपेक्षाबारे प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
प्रधानमन्त्रीका रूपमा म दोस्रो पटक चीन भ्रमणमा आएको छु । अहिले फरक प्रसंगमा भएको यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने र अझै गहिराइमा पुर्‍याउने छ । दुई वर्षअगाडिको मेरो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कोसेढुंगाको काम गरेको थियो । पूर्वाधार विकास र पारवहनका क्षेत्रमा चीनसँग भएका सम्झौताले जुन योगदान गरेका थिए, त्यसकै जगमा आज दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने काम भएको छ ।
मेरो पहिलो भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कोसेढुंगाको काम गरेको थियो, त्यतिबेला भएको पूर्वाधार विकास र पारवहन सम्झौताकै जगमा सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको छ
यस सन्दर्भमा महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सार्नुभएको बीआरआई एउटा गतिलो पहल हो । बीआरआई सबैका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ । नयाँ युगमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई मजबुत बनाएर साझा जित खोज्न म चीन भ्रमणमा आएको छु ।
सन् १९७८ मा सुधार तथा खुलापन नीति अँगालेपछि चिनियाँ समाजमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, चीनको सुधार र खुलापन नीतिबारे तपाईंको के धारणा छ ?
नयाँ चीन बनेपछि विकासका अनेक प्रयास चीनले गरेको छ । सन् १९७८ मा खुला नीति अपनाएपछिका चार दशकमा चीनले चौतर्फी उपलब्धि, प्रगति र आर्थिक उन्नति हासिल गरेको छ । विज्ञान-प्रविधि, सञ्चार, यातायातलगायत क्षेत्रमा गरेको विकास र मानवीय संसाधनमा गरेको प्रगति, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति अथवा सम्पूर्ण रूपमा गरेका विकासलाई हेर्ने हो भने तिनले आफैँ बताएका छन्, खुला नीतिको प्रभाव कस्तो रहयो भन्ने ।
वास्तवमा केही दशकयता विशाल जनसंख्या र ठूलो भूगोललाई समृद्धिको बाटोमा यति छोटो समयमा अगाडि बढाउनु सजिलो थिएन । खुला नीति र यसको कार्यान्वयन गर्न सक्षम नेतृत्वले जुन कौशल देखाएको छ, त्यसले चिनियाँ नीति ठीक छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
खुलापन र सुधारबाट चीनमा आएको परिवर्तनले नेपाल-चीन आर्थिक व्यापारिक आदानप्रदानमा के महत्त्व राख्छ ?
बोआओ फोरममा महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अझ खुलापनका साथ चीन अगाडि बढ्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । अर्थात् चीनले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउँछ । चीनमा मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिरका सहयोग र सहकार्यका क्षेत्र पनि विस्तार हुन्छन् भन्ने यसबाट प्रतिबिम्बित भएको छ । चीनको असर अवश्य नै जबरजस्त पर्नेछ । मैले विश्वास लिएको छु, सकारात्मक असर नै पर्नेछ । यस मामलामा नेपाल जो आफ्ना राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका माग र आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक टुंग्याएर स्थायित्वमा प्रवेश गरेको छ । स्पष्ट नीतिसाथ सुशासन र विकासका मार्ग अगाडि बढेका छन् ।
त्यसमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अथवा अरू खुलापनका नीति, सहयोग र सहकार्यमा अवश्य नै सराहनीय छन् । र, त्यसमा पनि नेपालका लागि सकारात्मक र आसलाग्दा छन् ।
तपाईंको नेतृत्वमा बहुमतको स्थिर सरकार बनेपछि चिनियाँ लगानीलाई कुन रूपले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल केही अगाडिसम्म निरंकुश सामन्ती नियन्त्रणकारी व्यवस्थाभित्र रहिआएको थियो । विश्वमा तीन प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा वैचारिक र व्यावहारिक संघर्षहरू हुने गरेका छन् । यी तीन प्रकारका राजनीतिक प्रणालीमा एउटा सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रणकारी प्रणाली हो भने अर्को आफूलाई अनियन्त्रित गर्ने नियन्त्रणहीन प्रणाली ।
स्थानीय तहमा पनि अत्यधिक बहुमतको सरकार छ । पपुलर जनमतका हिसाबले पनि अत्यधिक बहुमत साथ छ । यी सबै अनुकूलताले अब नेपाल आर्थिक समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रूपमा प्रयासहरू पर्याप्त हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा छिमेकी र मित्रहरूका सहयोग र सहकार्यलाई समुचित ध्यान दिनु र साथमा काम गर्न र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ । चिनियाँ लगानीप्रति नेपालको सकारात्मक दृष्टिकोण छ । नेपाल चीनसँग मिलेर आफ्ना विकासका आवश्यकता र दुनियाँको अर्थतन्त्रलाई नै सबल र न्यायोचित बनाउने दिशामा क्रियाशील छ ।
चीनले सन् २०२० सम्म सम्पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्ने घोषणा गरेको छ । गरिबी निवारणमा चीनको सफलताबाट नेपालले के अनुभव लिन सक्छ ?
नेपाल प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर र स्रोतका हिसाबले सम्पन्न मुलुक हो । विद्वान् पुर्खाका सन्तान हुन् नेपाली । मिहिनेती र इमानदार भनेर दुनियाँमा मानिएका जनता बस्ने देश हो नेपाल । अहिले पनि नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक शारीरिक श्रम गर्न सक्षम र सक्रिय छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकारका नीति र अपेक्षा तदनुसारकै छन् । विकासका दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, कानुनी राज्य सबै कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । तमाम कुरामा चीनको अनुभवबाट हामी सिक्न सक्छौँ ।
प्रकाशित : असार ६, २०७५ २२:०४